Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Al-Qacida, Dawladda Islaamiga ah oo ku guda jira hawlgal ay ku dili lahayd gobolka Venice ee Mopti ee Mali
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Wararka Mali • News • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
31 qof oo aan waxba galabsan oo saarnaa bas dadweyne oo ku sugnaa magaalada Mopti ee dalka Mali ayaa shalay weerar gaadmo ah lagu qaaday.
Tuulooyinka Mopti ee ku yaalla Galbeedka Afrika ee dalka Maali ayaa la og yahay in ay ka mid yihiin meelaha ugu quruxda iyo quruxda badan dalka. Hadda waa mid ka mid ah gobollada ugu dhimashada badan Mali.
Mopti,” Venice-ka Maali,” waa caasimadda gobolka shanaad. Jasiiraddan waxay leedahay mid ka mid ah dekedaha ugu mashquulka badan webiga Niger. Waa gobolka ugu wanaagsan ee dalxiiska.
Gobolku waa dheri dhalaalaysa, oo ka kooban qoomiyado kala duwan oo wada nool. Luqadaha guud ee aagga waxaa ka mid ah Fulani, Bambara, Dogon, Songhai, iyo Bozo.
Dalxiiska ayaa mar ahaa warshado soo koraya iyadoo Air Mali ay u duulaysay Mupti kana timid Timbuktu iyo Bamako, iyo basaska dalxiiska ee mara wadada midabka leh ee Mupti ilaa magaalo madaxda Bamako.
Gobolka ayaa hadda xudun u ah rabshadaha ka socda Maali oo ay hurinayaan fallaagada xiriirka la leh Al-Qaacida iyo dowladda Islaamiga ah.
Shalay, maleeshiyaad ayaa ugu yaraan 31 qof ku dilay bartamaha Mali Jimcihii ka dib markii ay rasaas ku fureen bas dad u waday suuq maxalli ah, maamulka maxalliga ah ayaa sheegay - weerarkii ugu dambeeyay ee lagu dilay gobolka oo hadda loo yaqaan oo ay maamulaan fallaagada rabshadaha wadata. Baska ayaa waxaa weeraray rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan, xilli uu ka soo ambabaxayay tuulada Songho, kuna sii jeeday suuq ku yaala magaalada Bandiagara, oo 10 kilomitir u jirta. Kooxo hubeysan ayaa rasaas ku furay gaarigaasi, waxa ay gooyeen taayarada, waxa ayna rasaas ku fureen dadkaasi.
Mali waa tan ugu badan ee lagu deeqay goobaha Dhaxalka Adduunka ee Afrika. Masaajidada Djingary Ber iyo Sankore ee Timbuktu, Masjidka Djenne, Dogon Country, Qabrigii Askia ee Gao, iyo Jaaral iyo Degal ee Diafarabe iyo Dialloube ayaa dhamaantood beesha caalamku aqoonsaday iyada oo lagu soo daray UNESCO World Heritage.
Goobahan dhaqameed ee sharafta leh waxay ku soo kordhiyeen muuqaalo qurux badan, xaafado iyo tuulooyin firfircoon oo midab leh, iyo badhtamaha Niger Delta oo leh qaab dhismeedka dhoobada ah iyo goobaha Ramsar ee sanad walba martigeliya kumanaan shimbiraha biyaha ah, Saxaraha Saxaraha ah ee quruxda leh, meelaha qaarkood, xiisaha. kora marka aad u safarto dalka oo dhan.
Marka la eego mawqifkeeda juqraafi, taariikhda, iyo dhaqanka, Mali waxay ahayd dalxiis iyo waddan ku jihaysan farsamada gacanta.
Maali waxay leedahay asal dhaqameed oo qani ah, waddankuna wuxuu u dabaaldegaa sannad walba xaflado kala duwan oo lagu qabto gobollo kala duwan: xaflado dhaqameed, xaflado muusig, xaflado diimeed, inta lagu gudajiro shirarka doodaha ayaa la abaabulay iyadoo ay ka soo qaybgaleen ajaanib ka kala yimid dhammaan qaaradaha.
Safaaradda Mareykanka waxay ka digaysaa: Ha u safrin Mali dambiyo, argagixisanimo, iyo afduub awgeed.
Ned Price, oo ah afhayeen u hadlay waaxda Mareykanka ayaa yiri: Mareykanka wuxuu si adag u cambaareynayaa weerarka lagu dilay dad rayid ah Sabtidii meel u dhow Bandiagara, Mali, kaasoo ay ku dhinteen 31 qof 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa dadka reer Maali, waxaanan sii wadi doonnaa inaan la wadaagno iyaga si ay u helaan mustaqbal badbaado, barwaaqo, iyo dimoqraadi ah.